I-Windsor Place Inn - i-King Room - I-Airbnb
I-Windsor Place Inn - i-King Room
Prairie du Chien, Wisconsin, i-United States
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-Kitt
Itholakala kude nethrafikhi yasedolobheni kanye nesimo sansuku zonke, zilungiselele ukuqalisa uhambo olusha ehhotela lethu lokwamukela nezivakashi, i-Windsor Place Inn. Izwa umoya wokungenisa izihambi ngokuthinta komuntu siqu ukuze uzizwe usekhaya.
Ngokudla kwasekuseni kwe-Continental, amagumbi ahlotshiswe ngokufudumele kanye nephuli yasendlini, awusoze wakungabaza ukukhetha kwakho indawo yokuhlala.
Ikamelo lethu elikhulu kunawo wonke edolobheni elinombhede omkhulu negumbi lokugezela elinamathiselwe. Leli kamelo lilungele inkampani yabantu abadala abangu-2. Ikamelo elikhulu linethezekile, lisesimweni sesimanje, futhi linawo wonke amasevisi adingekayo ahlanganisa i-TV yesikrini se-Flat, i-Microwave neFriji encane.
Sitholakala ku-Highway 18, ohambisana nomfula i-Mississippi futhi weqe izindawo zokudlela namabha. Sinezindawo ezimbalwa ezinhle eduze zokuhamba nokuhamba ngebhayisikili. I-Upper Mississippi River National Wildlife, enabela esifundeni sasePrairie du Chien, inikeza inkululeko yokudoba, ukujaha, ukumisa amakamu, kanye nokubuka impilo engalawulwa. Amapaki kahulumeni atholakala ebangeni elingamamayela kanye nesikhumbuzo Sikazwelonke sase-Effigy Mounds aphinde anikeze abathandi be-Adventure Seekers izindawo ezinhle zokugibela izinyoni nezokuqwala. Umuntu angakwazi futhi ukuzwa ukudoba ku-Mississippi kanye ne-backwaters yayo enkulu njengoba yaziwa ngokutholakala kwayo izinhlanzi ngobuningi.
I-Sun Prairie Cabela's
I-Pikes Peak State Park, i-Marquette/Mcgregor IA
I-Wyalusing State Park, Bridgeport, WI
I-St. Feriole Island Park
Hlola ezinye izinketho ezise- Prairie du Chien namaphethelo